MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန်
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန်
1 MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:28 am
တီရှပ် မှာ တံဆိပ်ကို ရှေ့မှာ Site Logo နဲ့ Site Name ထည့်မယ်။
ကျောဘက်မှာ MITR First Anniversary ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ကွေးကွေးလေးထည့်မယ်။ ကျောအပြည့်ပေါ့။
အဲဒါမျိုးဆိုရင် တစ်ထည်ကို 2000 လောက်ကျမယ်။ အဲဒါ အထည် 20 ဈေး။
အနည်းဆုံးတော့ 5သောင်း၊6သောင်းလောက်ကုန်မယ်လို့မှန်းထားတယ်။ ပိုက်ပိုက်အတွက်ကတော့ တစ်ယောက်ကို ၅၀၀၀ လောက်ထည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်။ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒပြောပါဦး။ အော်.....တီရှပ်က အပ်ရင် တစ်ပတ် စောင့်ရမယ်နော်။
2 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:34 am
z3r0c00l wrote: ကျွန်တော်တို့ပွဲအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
Why we need T-Shirt?
3 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:43 am
အမှတ်တရဖြစ်အောင်ထည့်မလားလို့။ ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ဆုရသူတွေကို ဘာပေးမှာလဲ?
ပြီးတော့ Admin Team အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေချင်လို့။
4 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:47 am
အဲဒါတွေ အရင်မတိုင်ပင်ဘဲ ၊ အချိန်လေး အရင်ညှိကြည့်ပါဦးလား။
5 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:47 am
အဖြူလေးတော့လုပ်ဗျာ နေပူတယ်ဆိုတော့ တခြားအရောင်တွေမကောင်းဘူး
အမှတ်တရ ဖြစ်သလို ကြောငြာသလိုလဲ ဖြစ်တယ်လေ
ပြီးတော့ ကျနော့မှာ အင်္ကျီဝတ်စရာမရှိဘူး..ဟီး..
6 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 9:51 am
မအားကြဘူးနဲ့ တူပါရဲ့....လုပ်ဖြစ်ရင်တောင် (၅)ယောက်လောက်ပဲ ရှိမှာထင်တယ်
7 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 10:04 am
$ƴǩǾ wrote: ပြိုင်ပွဲ?
အချိန်ကရတယ်..ဆိုက်ကို နဲ့ alt နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပြော။
အားလုံးညှိလိုက်မယ်။ စာမေးပွဲက ဘယ်တော့စမှာလဲ
8 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 10:54 am
alt အားပြီးသားပဲ ၂၅ မတိုင်ခင်ထိ.
9 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 11:04 am
ဦးဦးတို့ တားတား ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး။
10 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 11:20 am
Update News ပါ။
11 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 11:24 am
လောလေဆယ်တော့ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေဆိုရင် နေ့ လည် ၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှ အားတယ်နော်။
ကြားရက်တွေကတော့ ကျောင်းမသွားတော့ အားနေတယ်။
12 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 11:25 am
Founder & CO-Founder ၂ ယောက်လုံး စိတ်ဓါတ်ကျနေတယ်။
13 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 11:45 am
စာမေးပွဲတွေပြီးမှ လုပ်ကြပါ ။ စာမေးပွဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ ။
ကြာဇံကြော် ကြွေးမယ်ဆိုတာကောင်းပါသည် ။ တီရှပ်လုပ်မယ်ဆိုလည်း ကောင်းတယ် ။ တီရှပ်မှာ nick name
လေးတွေပါထည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလည်း အကိုတို့ ။
အလုပ်ရသွားပြီဆိုတော့ ထည့်ပေးလို့ရပြီ ။
14 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:09 pm
ဒါဆိုရင် 21.3.2010 လုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ (အကြမ်းဖျဉ်း)
ဒီတော့ 14.3.2010 ရက်နေ့ တွေ့ဖို့လိုပါမယ်။
ကိုထက်နိုင် စီဒီ ပေးမယ့်နေ့ပေါ့။ အပြင်မှာ ပို့်စ်တင်ပြီး Announce လုပ်ပါမယ်။
15 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:30 pm
z3r0c00l wrote: ဒါဆိုရင် 21.3.2010 လုပ်မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ (အကြမ်းဖျဉ်း)
21???3လပိုင်း???
16 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:33 pm
မဟုတ်ဘူးဆိုက်ကို။ မင်းတို့စာမေးပွဲ လုံးဝမထိခိုက်စေရဘူးကွာ။ မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့။ အကုန်လုံးကို ငါနဲ့ မော့ဒ်တွေပဲစီစဉ်လိုက်မယ်။ 14 ရက်နေ့တစ်ခါပဲ မင်းနဲ့ ဟာသ နဲ့ မိတင်ကိုလာခဲ့ပေး။ အကုန်လုံးကို ငါတို့ကြည့်လုပ်လိုက်မယ်။ နော်။
17 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:37 pm
z3r0c00l wrote: မဟုတ်ဘူးဆိုက်ကို။ မင်းတို့စာမေးပွဲ လုံးဝမထိခိုက်စေရဘူးကွာ။ မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့။ အကုန်လုံးကို ငါနဲ့ မော့ဒ်တွေပဲစီစဉ်လိုက်မယ်။ 14 ရက်နေ့တစ်ခါပဲ မင်းနဲ့ ဟာသ နဲ့ မိတင်ကိုလာခဲ့ပေး။ အကုန်လုံးကို ငါတို့ကြည့်လုပ်လိုက်မယ်။ နော်။
ဟာသ လည်း စိတ်ဓါတ်တွေ ကျနေတယ်။
အဲကောင်ကို နည်းနည်းလောက် အားပေးလိုက်ပါဦး။
ကျွန်တော်ကတော့ ထားလိုက်တော့။ အခုလည်း စာမကျက်ချင်လို့ Template ထိုင်ရေးနေတယ်။
အစ်ကိုဘဲ ဦးစီးပြီး ကောင်းမယ်ထင်တာသာ လုပ်ပါတော့ဗျာ။ အစ်ကိုလည်း Admin ဘဲဟာ။
18 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:41 pm
ဆိုလိုတာက တီရှပ် ပေးမလား/မပေးဘူးလား
ပြီးတော့ငါက မန်ဘာတွေကို ပို့စ်တင်တဲ့အခါ အဲဒီပွဲမှာ ပါတာတွေကို ကြေငြာမှာလေ။
ပြီးတော့ နေရာ ကန်တော်ကြီး/မြကျွန်းသာ/ပြည်သူ့ရင်ပြင်
အဲဒါလေးတွေ င့ါကိုတစ်ချက်ပြောပေး ဆိုက်ကို။
19 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:45 pm
ကျနော်ကတော့ ဒီပွဲလေးကို ဘာမှမကူနိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ... တကယ်ပါ... ကျနော်ဂတိပေးတယ်... နောက်နှစ်ကို ကျနော် တတ်တတ်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ကူညီပါ့မယ်လို့ ဂတိပေးပါတယ်... အားကျလိုက်တာ... 23 ရက်နေ့တဲ့..... :cry
20 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 12:55 pm
ကန်တော်ကြီးကလူရှုပ်မယ်ထင်တယ်... မြန်ကျွန်းသာကတော့ အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်တယ်.... အေးဆေးပဲလေ... ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကျတော့ ချိန်းထားတာတွေကို လိုက်ရှာဖို့က လူစုဖို့နေရာက သိပ်မတွေ့သလိုပဲ... ကျနော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ မြကျွန်းသာပါပဲ... ၀င်ပေါက်နဲ့ နီးတဲ့ Game City ရှေ့က မြက်ခင်းပြင်မှာဆို အကျယ်ကြီးပဲ အနှောက်အယှက်လည်းကင်းတယ်... စားစရာသောက်စရာတွေကိုလည်း မှာပြီးယူစားလို့ရတယ်... ကန်ရေပြင်နဲ့ ... ကျနော်က အကြံပေးရုံပါ.... တီရှပ်လုပ်ဖို့ကျနော့်အချိန်တော့ရပါသေးတယ်... လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်... လိုချင်တဲ့သူတွေကို စာရင်းကောက်ပြီး သူ့ရဲ့ nick အလိုက် လုပ်ပေးထားလိုက်ပေ့ါ.... အကြံပေးကြည့်တာပါ...
21 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 3:41 pm
အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြပါလား ပိုက်ပိုက်ကလည်းထည့်ပါမယ် အားလံုးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့
အတူဆုံပြီးအမှတ်တရဖြစ်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလား နောက်ပြီးနေရာက မြကျွန်းသာကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်
ကိုဆိုက်ကို ဘယ်လိုဖြစ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကြနေရတာလဲဗျ ဘာကိုစိတ်ဓာတ်ကြနေတာလဲ ပြောအုံးမှပေါ့
ကျနော်ဘာကူညီရမလဲ အားလုံးတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့လုပ်ရင် အကောင်းဆုံးကိုလုပ်နိုင်မှာပါ
22 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 5:13 pm
ဟုတ်ပြီ...ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ မိတင်ကို အကုန်လာပေးပါနော်။
မမေ့မလျော့လေး။ ဟိုတစ်ခါလို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အားလုံးပါနော်။ လာပေးကြပါ။ အသေးစိတ်အဲဒီမှာတိုင်ပင်ရမှာ။
ဒီကိစ္စမှာ Mod တွေကို အဓိကအားကိုးရမှာ။ လာခဲ့ကြပါနော်။
23 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 7:32 pm
ကျနော်တို့ ယတြာချေမှနဲ့တူတယ်... အကုန်လုံးက ဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူး... အခုလည်း ငါ့မှာ စိတ်ညစ်စရာ .. ကိုယ်စိတ်နဲ့မတွေ့တာတွေ... ကိုယ်ကိုကို စိတ်တိုင်းမကျတာတွေများနေတယ်.. စိတ်တွေကလည်းလေနေတာလား.. ပျက်နေတာလား.. ညစ်နေတာလားတောင် ကိုယ်တိုင်မခွဲခြားတတ်တော့ဘူး... ဟာသလည်းအဲလိုပဲတဲ့... အခုလည်းလာပြန်ပြီတစ်ယောက်... ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟင်... ငါ့ကိုငါမေးတာအဖြေမရတော့လို့.... ( topic တော့ချော်နေပြီထင်တယ်... ဒါလေးကိုဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တော့နော်... ပြီးပြီ)
24 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 11th March 2010, 7:42 pm
ကျွန်တော်ကတော့ မီတင်ပွဲကို လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေဘဲ ကြည့်ပြီးစီစဉ်ကျပါ ။
ပြီးရင် ကျွန်တော်ဆီကို mail ဖြစ်ဖြစ် pm ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးထားပါ ။ ပိုက်ပိုက်လည်းထည့်ချင်ပါတယ် ။
25 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 12th March 2010, 2:48 pm
မီတင် အချိန်ကို ၂ နာရီအစား ၁ နာရီ ပြောင်းပေးပါလား ခင်ဗျာ ။ ရောက်အောင်လာပါမယ် ။
အကြာကြီးတော့ရဘူး ၄၅ မိနစ်တော့ရတယ် ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို ကူညီပေးကျပါနော် အချိန်ကို ရွှေ့ပေးကြပါနော် ။
26 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 16th March 2010, 7:12 pm
I AM NOT FREE YEP.... THAT3MONTHS..... SO PLEASE CALL ME MY PHONE AND TELL ME CLEARLY...... SO SORRY FOR I CAN'T COME TO ONLINE.... AND I CAN'T DO ANTHING..... FORGET ME PLEASE.................
27 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 16th March 2010, 10:19 pm
ဖိုရမ်ရဲ့ ပွဲတွေမှာတစ်ခါမှ မပါရပြန်ဘူး
ကျနေ်ာ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး
အခုဒီပွဲအတွက် ကျနေ်ာဘက်က ဘာများကူညီပေးနိုင်မလဲ
အဝေးရောက်နေပေမဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီနိုင်အောင်လို့ပါ
28 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 5th April 2010, 7:02 pm
အစီအစဉ်တွေ ဘယ်လို စီစဉ်နေကြလဲဟင်။
29 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 6th April 2010, 5:47 pm
z3roc00l ပြောတော့ အစည်းအဝေးလုပ်ဦးမယ်ဆို။ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာ ပြောပြီးလုပ်ပေါ့။
30 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 7th April 2010, 12:43 pm
အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆို၇င်လည်း မြန်မြန်လုပ်ကြပါ ရက်ကနီးနြေ့ပီး
တရက်လောက်တော့ တွေသင့်တယ် ထင်တယ်
31 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန် on 7th April 2010, 12:54 pm
shinthant wrote: အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆို၇င်လည်း မြန်မြန်လုပ်ကြပါ ရက်ကနီးနြေ့ပီး
32 Re: MITR First Anniversary ပွဲအတွက် အသေးစိတ်တိုင်ပင်ရန်